पत्रकार रबि लामिछाने दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण, कोरोना पुष्टी भएपछि रविले यस्तो लेखे
October 29, 2020 2640
नेपालका चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भक्रो छ । उनले फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गर्दै दुवै जनालाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले यस्तो लेखेका छन्:
गत मंगलबार राति बाट हल्का ज्वरो आए पछि हिजो PCR टेष्ट गर्दा, म र निकीता दुबै मा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। हामी दुबैको स्वास्थ सामान्य छ। केही पेशागत क्रियाकलापले र केही आफ्नै लापरबाहीले संक्रमण भएको हुन सक्दछ। घरमा हामी दुई मात्र छौ त्यसैले धेरै समस्या छैन तर घरमा बृद्धअबश्थाका सदस्यहरु हुनेले चाहिँ बिल्कुल लापरबाही नगरौं।
कोरोना भाइरसको संक्रणम हुँदा कसरी साबधानी अपनाउने ? कोरोना भाइरस के हो ? यसबारे यहाँ केही जानकारी प्रदान गरिएको छ ।
Prevटुसा उम्रेका गेडा’गुडीको झोल खानुका यस्ता छन् -: फाइदै फाइदा
Nextघट्यो सुनको मूल्य, आज तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्…
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50986)